Ra'iisul wasaaraha Hindiya oo lagu heysto kaftan siyaasadeed - BBC News Somali
Ra'iisul wasaaraha Hindiya oo lagu heysto kaftan siyaasadeed
7 Maarso 2019
Mr Modi ayaa hadalkaas jeediyay isagoo meel fagaare ah ka hadlayay
Haweeney Khabiir sare ah oo ku xeel dheer cilmi nafsiga ku saabsan carruurta ayaa sheegtay in Ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi uu ku khasban yahay inuu raalli galin bixiyo, ka dib markii dhowr maalmood ka hor isagoo kaftamayay loo fahmay inuu meel uga dhacay barnaamijka ka shaqeeya xannaanada carruurta ay fahmadooda hooseyso ee loo yaqaanno dyslexia.
Mr Modi ayaa hadalkaas jeediyay isagoo meel fagaare ah ka hadlayay, waxaana arrintan ay dhalisay muran iyo caro aad u xooggan.
Ra'iisul wasaaraha ayaa soo jeediyay su'aal ku saabsaneyd in barnaamijka carruurta ee dyslexic uu sidoo kale hayo wax loogu tala galay "Cunug ay da'diisu tahay 40 ilaa 50 sano".
Modi oo ka hadlay muranka ka taagan lo'da
India oo qorshaynaysa inay 18 safaaradood ka furato Afrika
Hadalkaas ayaa u muuqday in Mr Modi uu ku weerarayay siyaasiga kasoo hor jeeda ee lagu magacaabo Rahul Gandhi.
Dr Roma Kumar ayaa tidhi: "Marka uu mas'uulka dalka ugu sarreeya arrintan oo kale ka hadlo, waa mid aad iyo aad xasaasi u ah. Wuxuu ku khasban yahay inuu raalli galin ka bixiyo".
Dhawaaqa kasoo yeeray haweeneydan khabiirka ku ah cilmi nafsiga carruurta ayaa sii xoojinaya cambaareynta loo jeedinayay Ra'iisul wasaare Modi ee ku saabsan kaftankiisii siyaasadeed.
Dr Kumar ayaa ka howl gasha xarun caafimaad oo si gaar ah loogu qaabilo ilmaha ay fahma darrada dhinaca maskaxda ah heysato, waxayna horay muddo 30 sano ah uga soo shaqeysay isbitaalka ku yaalla magaalada Delhi ee Sir Ganga Ram Hospital.
Dyslexia ayaa ah xanuun caan ah oo carruur badan saameeya isla markaana sababa in ilmaha ay ku adkaato wax barashada, sida akhrinta, qorista iyo higaadda.
Dadka caanka ah ee xanuunka dyslexia uu saameeyay marka ay yaraayeen waxaa ka mid ah agaasimaha dhinaca filimada ee lagu magacaabo Steven Spielberg iyo labada jilaa ee sida weyn loo yaqaanno ee kala ah Tom Cruise iyo Abhishek Bachchan.
Daraasad ay dowladda Hindiya sameysay sannadkii 2015-kii ayaa lagu sheegay in ugu yaraan 10% oo tiro ahaan ku dhow 35 malyan oo carruurta Hindiya ah ay qabaan xanuunka dyslexic.
Hase yeeshee, Dr Kumar ayaa aaminsan in tiradu ay intaas aad uga badan tahay, wacyi galinta la sameeyana ay aad u yartahay.
Ra'iisul wasaare Modi ayaa kaftanka la qoonsaday jeediyay habeenkii Sabtida, mar uu khudbad u jeedinayay arday wax ka barata cilmiga Injineeriyada.
Su'aasha ay ku jirtay oraahda carada dhalisay ayuu weydiiyay mid ka mid ah ardayda oo ra'iisul wasaaraha u sheegtay arrimo ku saabsan barnaamijkeeda.
Jabuuti oo heshay tallaalka coronavirus
Masar iyo Suudaan oo dalbaday dhexdhexaadin si loo soo afjaro khilaafka Webiga Niil
'Xaaskeyga waxaa laga dhigay aalad lagu gorgortamo'
Xildhibaan doonayey inuu ka gaaro aaska hooyadii oo isagii geeriyooday
Su'aalaha aan wali jawaabaha loo helin ee ku saabsan weerarkii xabsiga Boosaaso